Rahoviana no afaka mandeha mitsangantsangana indray?
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny cruise » Rahoviana no afaka mandeha mitsangantsangana indray?
Ny CDC dia mamoaka ny dingana manaraka amin'ny Order Condition Sailing Order ho an'ireo mpandraharaha sambo fitsangantsanganana
Ny ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) dia mitaky làlana fitsangantsanganana mba hametrahana fifanarahana eny amin'ny seranan-tsambo izay kasain'izy ireo hiasa, hampihatra fanandramana mahazatra ny ekipa, ary hamolavola drafitra ampidirina paikady fanaovana vaksiny hampihenana ny mety hampidirana sy hampielezana ny COVID-19
Fampitomboana isan-kerinandro hatramin'ny isan'andro ny tatitra matetika momba ny tranga COVID-19 sy ny aretina
Mampihatra fanandramana mahazatra ny ekipazy rehetra miorina amin'ny satan'ny loko misy ny sambo
Ny fihenan'ny fotoana ilaina amin'ny sambo "mena" ho tonga "maintso" 28 ka hatramin'ny 14 andro
Androany, ny Foibe Miady Amin'ny Aretina (CDC) namoaka ny dingana manaraka amin'ny fitarihana ara-teknika eo ambanin'ny Framework for Conditional Sailing Order (CSO) mitaky làlana fitsangantsanganana mba hametraka fifanarahana any amin'ny seranan-tsambo izay kasain'izy ireo hiasa, hampihatra fanandramana mahazatra ny ekipazy, ary hamolavola drafitra ampidirina paikady fanaovana vaksiny hampihenana ny mety hampidirana sy fiparitahan'ny ekipazy sy ny mpandeha ny COVID-19.
Ity dingana ity, ny faharoa amin'ny CSO navoaka tamin'ny Oktobra 2020, dia manome torolàlana teknika momba ny:
Fampitomboana isan-kerinandro hatramin'ny isan'andro ny tatitra matetika momba ny tranga COVID-19 sy ny aretina.
Mampihatra fanandramana mahazatra ny ekipazy rehetra miorina amin'ny satan'ny loko misy ny sambo.
Fanavaozana ny rafitra fanaovana kaody loko ampiasaina amin'ny fanasokajiana ny satan'ny sambo manoloana ny COVID-19.
Ny fihenan'ny fotoana ilaina amin'ny sambo "mena" ho tonga "maintso" manomboka amin'ny 28 ka hatramin'ny 14 andro mifototra amin'ny fisian'ny andrana an-tsambo, ny protokolam-pitsapana fanao mahazatra ary ny fanaovana tatitra isan'andro.
Mamorona fitaovana fanomanana fifanarahana izay tsy maintsy eken'ny tompon'andraikitra amin'ny seranan-tsambo sy ny manampahefana misahana ny fahasalamana eo an-toerana mba hahazoana antoka fa manana fotodrafitrasa ilaina ny sambo fitsangantsanganana mba hitantanana ny fiparitahan'ny COVID-19 amin'ny sambony mba hampidirana ny fahaizan'ny fahasalamana sy ny trano hanokanana ireo olona tratry ny aretina sy ny quarantine ireo izay miharihary.
Mametraka drafitra sy fandaharam-potoana amin'ny fanaovana vaksiny ny mpiasa sy ny mpiasa ao amin'ny seranan-tsambo.
Ny dingana manaraka amin'ny CSO dia ahitana fitsangatsanganana (fitsapana) namboarina izay ahafahan'ny mpiasa sy ny mpiasa ao amin'ny seranan-tsambo mampiasa fomba fiasa COVID-19 vaovao miaraka amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo alohan'ny sambo miaraka amin'ireo mpandeha.
CDC dia manolo-tena hiara-hiasa amin'ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo sy ny seranam-piaramanidina mba hanohy ny fitsangantsanganana an-tsambo rehefa azo antoka izany, manaraka ny fomba fiasa voafaritra ao amin'ny CSO.